प्रहरी नै बलात्कारी ! कारवाही माग गर्दै प्रदर्शन « Niatra TV
प्रहरी नै बलात्कारी ! कारवाही माग गर्दै प्रदर्शन
नवलपरासी, ६ जेठ । नवलपरासीमा प्रहरीले नै एक युवती र महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लगाउँदै स्थानियले प्रदर्शन गरेका छन् । प्रहरीले एक किशोरीसहित २ महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप नवलपरासीका स्थानीयले लगाएका छन् । बलात्कार गर्ने प्रहरीमाथि कारवाही माग गर्दै स्थानीयले प्रदर्शन गरेका छन् । स्थानियको प्रदर्शन पछि २ प्रहरी जवान निलम्बनमा परेका छन् ।
पश्चिम नवलपरासीको सुनवलमा रहेको दङ्गा नियन्त्रण प्रहरी कार्यालयकमा कार्यरत प्रहरी जवान प्रेम खड्का र पाटेश्वर यादवमाथि बलात्कारको आरोप लागेको हो । उनीहरुलाई १७ वर्षीया किशोरी र २६ वर्षीया महिला बलात्कार गरेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
गत वैशाख १ गते भएको घटना भएपनि पीडितले ढिलोगरी त्यसवारे प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । घाँस काट्न गएका उनीहरुलाई जवानद्वयले बलात्कार गरेको दाबी स्थानीयले लगाएका छन् ।
तर, घटनालगत्तै पीडितले मुख नखोलेर केही दिनपछि मात्रै यसबारे प्रहरीकोमा उजुरी गरेका थिए । स्थानीयले घटना सतहमा आएलगत्तै रक्षक नै भक्षक भएको भन्दै प्रहरी जवानद्वयमाथि कारवाही माग गरेर प्रदर्शन थालेका छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय, नवलपरासीले स्थानीयको आरोपपछि २ प्रहरी जवानमाथि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । नायव प्रहरी उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले बलात्कार आरोपित दुवै जवानलाई जबर्जस्ती करणीमा मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।